Dowladda Kenya oo Mamnuucday dhaqdhaqaaqa NRM | SAHAN ONLINE
Dowladda Kenya oo Mamnuucday dhaqdhaqaaqa NRM
NAIROBI – Dowladda Kenya ayaa ka dhawaajisay in dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta ee NRM ee mucaaradka Kenya uu yahay mid burcad ah.
Isbaheysiga mucaaradka ee NASA ayuu dhaqdhaqaaqan qeyb ka yahay,iyadoona tallaabada lagu mamnuucay ay timid kaddib markii mucaaradka Kenya ay shalay iyaguna xilka madaxtinimada Kenya u dhaariyee hoggaamiyaha Mucaaradka Kenya Raila Odinga.
Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa shalay kasoo hor muuqday kumanaan qof oo isugu soo baxay beerta xorriyadda ee Uhuru Park ee magaalada Nairobi,halkaasoo lagu dhaariyay in uu yahay”Madaxweynaha Shacabla”Kenya.
Raila Odinga ayaa ku dhaartay in uu Ilaalin dokno Dastuurka dalka isla markaana uu ku hoggaamin doono Kenya.
Raila Odinga ayaa dhaarta kaddib hadal kooban uu jeediyay ku sheegay in shacabka ay ridi doonaan waxa uu ugu yeeray xukunka kaligii talisnimada ah.
Uhuru Kenyatta ayaa horay loogu dhaariyay xilka madaxtinimada ee dalka Kenya, iyadoona guddiga madaxa bannaan ee Doorashooyinka Kenya ay sheegeen in uu ku guuleystay Madaxweynaha xilka haya.
Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa ku dooday in uu ku guuleystay doorashadii bishii 8aad la qabtay,halka guddiga doorashooyinka sheegeen in uu ku guuldaraystay doorashadii ku celiska ahayd ee dhacday bishii tobanaad ee sannadkii hore.
Dowladda oo ka hortagaysa xafladda dhaarinta Raila Odinga ayaa damisay qaar kamid ah warbaahinta gaarka loo leeyahay oo si toos ah u tabinayay xafladda dhaarinta,waxayna mucaaradku ku tilmaameen qiyaano qaran.